မိဘကျေးဇူး အကျေဆပ်နည်း	Posted on October 24, 2009	by mettayate မိဘကျေးဇူးဆပ်ချင်သူများအတွက် အရှင်ဆန္ဒာဓိက၏ နို့နှစ်လုံးကျေပါတယ် စာအုပ်မှ ကောက်နှုတ်ပါသည်။
မြတ်စွာဘုရားက – “ချစ်သား ချစ်သမီးတို့ . ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက် မွေးမိခင်နဲ့ မွေးဖခင် ရဲ့ကျေးဇူးကို အလွယ်တကူ ဆပ်ရုံနဲ့ မကျေနိုင်ဘူး။ ကျေအောင်ဆပ်ဖို့ မလွယ်ဘူး လို့ ငါဘုရားပြောချင်ပါတယ်။ နှစ်တစ်ရာတမ်းမှာ အနှစ်တစ်ရာအသက်ရှည်တဲ့ သားသမီးက အမေကို လက်ယာပခုံးမှာတင်၊ အဖေကို လက်ဝဲပခုံးမှာတင်ပြီး ရာသက်ပန်ပြုစုလုပ်ကျွေးတယ် ဆိုကြပါစို့၊ ပခုံးထက်က မိဘနှစ်ပါးကို မွှေးပျံ့သင်းကြိုင်အောင် နံ့သာမျိုးစုံနဲ့လည်း ပွတ်တိုက်လိမ်းကျံပေးတယ်။ အညောင်းအညာပြေအောင် လက်တွေ ခြေတွေကိုလည်း ဆုပ်နယ်ပေး နှိပ်ပေးယ်။ အေးတဲ့အခါ ရေနွေး၊ ပူတဲ့အခါ ရေအေးနဲ့လည်း ရေချိုးသန့်စင်ပေးတယ်။ ကိုယ်လက်ပေါ့ပါးချမ်းသာအောင် လက်တွေ ခြေတွေကိုလည်း ဆွဲဆန့်ပေးတယ်။ ပခုံးထက်မှာပဲ ကျင်ကြီးကျင်ငယ် စွန့်စေတယ်။
မိဘက ကိုယ့်ကိုထမင်းဘယ်နှနပ် ကျွေးခဲ့ဖူးသလဲ။ ကိုယ်ကရော မိဘကို ထမင်းဘယ်နှနပ်ပြန်ကျွေးခဲ့ပြီးပြီလဲ။
မိဘက ကိုယ့်ကိုအကျီင်္ လုံချည်ဘယ်နှထည်ဆင်ခဲ့ဖူးသလဲ။ ကိုယ်ကရော မိဘကို အကျီင်္ လုံချည်ဘယ်နှထည် ၀ယ်ပေးပြီးပြီလဲ။
ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကြောင့် မိဘမှာ အောက်ဆုံးထစ် တစ်မဂ်တစ်ဖိုလ် ကျွတ်တန်းခိုခွင့်ရတယ်ဆိုရင်ပဲ မိဘကျေးဇူးအကြွင်းမဲ့ ကျေသွားပါပြီ။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်ရအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ရင်လည်း မိဘကျေးဇူးအကြွင်းမဲ့ ကျေပါတယ်။ ပုထုဇဉ်အဆင့်ကနေ သောတပန်အရိယာအဆင့်ကို ရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ပဲ သိပ်မကြာလှတော့တဲ့ တချိန်မှာ ရဟန္တာဖြစ်ဖို့ သေချာသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် မိခင်ကို သောတပန်ဖြစ်အောင် ဓမ္မနို့ရည်တိုက်ကျွေးပေးတဲ့ သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ဟာ မိခင်ကျေးဇူးကို နို့နှစ်လုံးဖိုးလုံးကျေအောင် ဆပ်ပြီးသား ဖြစ်တော့တာပါပဲ။
– ဘာကုသိုလ်ပဲပြုပြု နိဗ္ဗာန်ကို ဦးတည်ပြီးပဲ ပြုဖို့တိုက်တွန်းပေးခြင်း၊ – ကိုယ့်ကြောင့် မိဘရဲ့ဝိပဿနာအားထုတ်မှု အနှောင့်အယှက် မဖြစ်အောင် အရာရာသတိပြုနေထိုင်ခြင်း။
This entry was posted in ဆုံးမသြ၀ါဒများ and tagged ထေရ၀ါဒ. Bookmark the permalink.	← နို့နှစ်လုံးဖိုး ကျေပါတယ်
Black Eyed Sophi says:	November 18, 2011 at 12:55 pm	တစ်နည်းနည်းနဲ့ တော့ ကျေအောင်ဆပ်မှာပါ ….
Reply	mettayate says:	November 19, 2011 at 3:13 am	သာဓု သာဓု သာဓု